कागती र बेसारपानी निरन्तर यसरि खाएर‘होम आइसोलेशन’का आठ जनाले जिते कोरोना
कास्की,६ भदौ- पोखरा महानगरपालिका–५ मालेपाटन स्थित बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा बागवानी अधिकृत पदमा कार्यरत सरोज अधिकारीलाई गत साउन २६ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । सामान्य रुघाखोकी लागेपनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो अन्य कुनै लक्षण उहाँमा थिएन । कार्यालयको आवास गृहमा ‘होम आइसोलेशन’को मापदण्ड पूरा.....
बजारमा गएर पानीपुरी खाने हरुले एकपटक पढ्नै पर्ने
पानीपुरी भन्नासाथ सबैको मुख रसाउने गर्दछ । पानीपुरीको अ’मिलो, पि’रो स्वा’दका कारण विशेषय महिलाहरु यसमा लो’भिने गर्दछन् । भारतिय परिकारका रुपमा चिनिने पानीपुरी अहिले हरेक गल्ली तथा चोकमा पाइन्छ । यसलाई पु’च्का, गो’लगप्पा, गो’लगप्पे नामले समेत चिनिन्छ । भिडियो हेर्न तलको लिन्कमा क्लिक आँ’टा र सुजी मि’साएर.....
उसिनेको आलुले जस्तोसुकै कालीलाई पनि २० मिनेटमा गोरि बनाउछ ! यो तरिका अपनाउनुहोस [भिडियो सहित] हामी अनुहारलाई लिएर निकै चि’न्तित हुने गर्दछौ। सुन्दर गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ। क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अनुहार चम्काउन.....
गोरखाका गण्डकी गाउँपालिका चार बालबालिकामा दादुरा
गोरखाका गण्डकी गाउँपालिका चार बालबालिकामा दादुरा पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएको गोरखा जिल्लामा दादुराको संक्रमण देखिएको छ । गण्डकी गाउँपालिका–७ घ्याल्चोकका चार जना बालबालिकामा दादुराको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । दादुरासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि रगतको नमूना परीक्षणका लागि.....
काठमाडौं । नेपालमा यौ’नका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन । यौ’नका बारेमा जति चर्चा गर्दा या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जनको विषय । फ्रायडले धेरैअघि मानिसका सबैजसो क्रिया यौ’नमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा.....
ह’स्तमै’थुन गर्नुका ७ अनाैठा फाइदा / जानिराखौ ।
ह’स्तमै’थुनका बारेमा मानिसहरुको विभिन्न धारणा छ । कोही यसलाई अ’श्लील व्य’वहार ठान्छन् भने कोही यसलाई सही ठान्छन् । तर विज्ञानले भने ह’स्तमै’थुनलाई ग’लत मान्दैन र यसलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मान्छ । ह’स्तमै’थुनको दौरानमा मानिस आफ्नो दिमागमा सुन्दर पलहरुको कल्पना गर्छ र त्यसकै बारेमा सोच्न.....
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ : थाहा पाहुनुहोस्
सबै महिलाहरुलाई आफ्नो क’पाल लामो र सुन्दर बनाउन मन पर्छ । तर चाहेर पनि बनाउन सकीरहे’का हुँदैनो । हा’मीले आफ्नो शरीरमा जुन चिज प्रयोग गर्छौ उस’को प्रभाव हाम्रो कपालमा पनि पर्नसक्छ । कपाल राम्रो गराउनु भन्दा पनि पहिला झर्न रोक्नु पर्छ । कपालको हेरविचार’कपाल धुने तरीका परिर्वत’न गर्नेः हप्ता’मा तीन पटक.....
Breaking: पश्चिमाञ्चल अस्पतालले कोरोना भाइरसको जस्तो लक्षण भएका विरामीलाई पनि घर पठायो……
Breaking: पश्चिमाञ्चल अस्पतालले कोरोना भाइरसको जस्तो लक्षण भएका विरामीलाई पनि घर पठायो...... सोमबार रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएको र छातीमा संक्रमण भएका एक विरामी उपचारार्थ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गए का थिए। उनको ज्वरो १०३ थियो भने छातीमा निमोनिया थियो । रुघा खोकी पनि लागेको थियो । सोमबारै उनको स्वाब.....
कोरो’ना त्रा’स : चिकित्सकले छाडे जागिर
डडेल्धुरा : डडेल्धुरा अस्पताल डडेल्धुरामा कार्यरत २ जना चिकित्सकले काम छोडेर गएका छन् । दुवै जना डाक्टरले पारिवारिक समस्या देखाएर काम छोडेको डडेल्धुरा अस्पतालका मे सु डा.जगदीश चन्द्र बिष्टले बताए। काठमाडौंबाट आएका दुवै चिकित्सक करारमा काम गर्नका अस्पतालमा पुगेका भए पनि उनीहरु पछिल्लो समयमा कोरोना.....
घ्यू कुमारीले गर्छ १६ भन्दा बढी औषधीको काम ! आँखाको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ । कानको रोगमा घ्यू कुमारीको गुदी मनतातो पारेर २\_३ थोपा दाहिने कान दुखोमा देब्रे कानमा र देब्रे कान दुखेमा दाहिन कानमा हाल्ने.....